बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपिओमा ५ प्रतिशत आरक्षण ! - Tamang Online
बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपिओमा ५ प्रतिशत आरक्षण !
बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई कम्पनीहरुले निष्काशन गर्ने प्राथमिक शेयर (आईपिओ)मा आरक्षण दिन माग गरिएको छ । औपचारिक रुपमा रेमिटेन्स भित्र्याई त्यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने बिषयमा सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
श्रम , रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले आज मन्त्री गोकर्ण बिष्टलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली वा तिनका परिवारले आवेदन गर्न पाउने गरी आईपिओमा ५ प्रतिशत आरक्षण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो । त्यस्तै सर्वेक्षण अध्ययन भईसकेका परियोजनाहरुको परियोजना बैंक बनाउने र त्यसको लागि लगानी जुटाउन विप्रेषणकर्ताले स्वेच्छाले शेयर लगानी गर्न पाउने ब्यबस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । बिजपाटिबाट |
« इजरायलको नतानिया शहरमा भर्खरै शिशु फोहरमा फ्याकेको भेटियो (भिडियो) (Previous News)
(Next News) हुण्डीबाट पैसा पठाउनेलाई श्रम स्वीकृति नदिने र अर्को पटक विदेश जान नै रोक्ने तयारी »